सिंहदरबार हाेइन, दूरदराज मागें - Boli Dainik
उनले भनिन्, ‘‬दिनभरी अफिसको कार्यक्रम भयो।‬ साँझ परेपछि हामी आ-आफ्नो कोठामा गयौं।‬ राति नौ बजेको थियो होला।‬ मोबाइल र मेसेन्जरमा पुरुष सुपरीवेक्षक र सहकर्मीहरूको लगातार एसएमएस आउन लाग्यो।‬ मैले रेस्पोन्स नगरेपछि फोन नै आयो।
‘के छ म्याडम? हजुरको कोठा हेर्न आऊँ कि भनेर…’ यस्तै यस्तै।‬ म अक्क न बक्क भएँ। मोबाइल खुला हुँदा फोन आउला भन्ने डरले बन्दै गरेँ।‬ घरमा बच्चा बिरामी थियो।’‬
उनले थपिन्, ‘केही बोले महिलालाई नै ऊ त्यस्तै भएर त हो भन्न थाल्छन्।‬ कसलाई स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु?‬ अनि को-कोसँग भिड्नु ?
निजामती सेवामा पुरुष उम्मेदवारभन्दा महिलालाई सेवा प्रवेशका लागि उमेर हद, समावेशी लगायत पक्षमा बढी सुविधा छ।‬ राज्यको नीति र महिला स्वयमको उत्साहका कारण सहायक स्तरका पदमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ।‬ तर वृत्ति-विकासको स्पष्ट योजना नहुँदा बढुवा हुनु ‘ब्लु मून’ जस्तै हुन्छ।
‘जति सुकै महिला समानताको कुरा गरे पनि महिलालाई लोक सेवा पढेर बस्न साह्रै गाह्रो हुने रहेछ,’ साथी सीता भन्दै थिइन्, ‘घरमा जागिर खाउ, लोक सेवा पढ त भन्नु हुन्छ तर घरको काममा सहयोग नै हुँदैन।’
‘महिलाले चुनौती सामना गर्दैनन्, सिंहदरबारमा झुम्मिएर बस्छन्’ भनिन्छ। तर जिम्मेवारी दिन अझै पनि हिच्किचाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।‬ पुरुषलाई जिम्मेवारी दिएर बाँकी रह्यो भने ‘ल ल, एक सिट महिलाको नि राख्नु न, समावेशीको कुरा छ’ भनेको सुनिन्छ।
मैले मन्त्रालयमा गएर जिम्मेवार पदाधिकारीलाई भनेँ, ‘सर, सहायक बसेको नि धेरै भयो। कर्णालीका कुनै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी पाए काम गर्थेँ।’‬
उहाँले ‘तपाईंलाई सिडिओमा पठाउन मापदण्ड नै पुग्दैन’ भन्नुभयो।
‘उनलाई सिडिओ त के पठाउनु?’ भन्नुभएछ।
एक जना शुभेच्छुकले सुनाउनुभयो, ‘तपाईंको त यो पटक पनि होलाजस्तो छैन।‬ तपाईंलाई त ‘मोडल पठाउने हो कि सिडिओ पठाउने भन्दै हाँस्दै हुनुहुन्छ।’
तर संसदमा एक जना सांसदबाट नै ‘रोपार्नी सिडिओ पठाएको’ भनेर मेरो कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाइयो।
त्योभन्दा अगाडि गएका पुरुष सिडिओलाई त्यस्तो ‘रोपार्नी, बाउसे वा हली कर्मचारी’ भनेर संसदसम्म आवाज उठाइएको मैले सुनेकी थिइनँ।‬
घर बिदामा गएका प्रहरी नायव उपरीक्षकले केही हप्तासम्म ‘धन्न, बिदामा गइएछ।‬ सिडिओ गएपछि म पनि जानुपर्थ्यो।‬ मलाई पनि डिएसपी पठाएको कि हली पठाएको भनी प्रश्न उठ्ने रहेछ’ भनेर हँसाउनु हुन्थ्यो।‬
दक्षिण कोरियाको ईभा वुमन्स युनिभर्सिटीको मास्टर डिग्रीमा मेरो शोधपत्र लेखन क्रममा हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेर फर्केका प्रोफेसर डाक्टर योंग्जिंग चो मेरो थेसिस गाइड हुनु हुन्थ्यो। उहाँका कक्षा असाध्यै उत्प्रेरक हुन्थे। प्राय: उहाँ ‘सिकेर गएपछि आफ्नो देशमा आफूले पढेको विषयमा योगदान पुर्‍याउनु’ भन्नुहुन्थ्यो।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा जान पाए हुन्थ्यो सर,’ मैले अनुरोध गरेँ।
सरले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ महिला धेरै भएका छन्, नपठाउनू भन्ने कुरा छ।’
अनि त्यस्तो सोच देख्दा दुःख पनि लाग्यो। कुनै अफिसमा ‘पुरुष धेरै भए, अन्य पुरुष नपठाउनू’ भनेको त अहिलेसम्म मैले सुनेकी छैन।
कहिलेकाहीँ स्कुल नै पुग्न नपाई बाटैबाट घर फर्किएको बच्चाले, ‘मम्मी अब म कहाँ जाने’ भन्यो भने कता पठाउनु? सकसै हुन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ बाध्यताले बच्चा अफिस ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आफू मिटिङमा गएको वा काममा भुलेको बेला बच्चाले कम्युटर चलाई दिँदा समेत अनावश्यक समाचार बनेको पाइन्छ। अनि सामाजिक सन्जालमा ‘सरकारी अफिसमा कम्युटरको दुरुपयोग’ भन्दै गालीको वर्षा हुन्छ।
ऐनमा निर्धारण गरेको उमेरअनुसार जाँच पास गरी छनौट भएर गए पनि महिला कर्मचारीलाई सुरूमै विश्वास गर्न गाह्रो देखिन्छ। पुरुष कर्मचारी भए ‘सर’, महिला भए ‘नानी’, ‘बैनी’, ‘दिदी’, यस्तै भनेर सम्बोधन गरिन्छ। पारिवारिक हिसाबमा त ठीक होला तर कार्यालमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मायाले होस् या दयाले गरिने यस्ता सम्बोधन विभेदका संकेत हुन्।
अझै मौका पाए भने अगाडि बढेर, ‘तपाईंको श्रीमान के गर्दै हुनुहुन्छ?’, महिला कर्मचारी खरिदार हुन् भने ‘सर नायब सुब्बा हुनुहुन्छ?’, अफिसर महिला हुन् भने उपसचिव एवम् रितले एक तह माथिल्लो पद राखेर प्रश्न गरेका हुन्छन्।
अर्कोतर्फ कुनै महिलाको पद श्रीमानभन्दा माथिल्लो छ भने त अहो! ‘उनको श्रीमान त…स्वास्नीभन्दा तल्लो पदमा रहेछन्, त्यो पुरुषलाई त मान्नै पर्छ, भन्ने गाइँगुइँ सुनिन्छ।
विदेशका महिला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले संसदमै स्तनपान गराएको, बिदामा घुमघाम गरेको, समुद्र किनारमा बसेर वाइन पिएको तस्वीरलाई हामी ‘वाह वाह’ गर्छौं।‬ तर आफ्नोमा खुरूखुरू काम गर्ने, चर्चामा आउन नचाहने र कानुन अक्षरस पालना गर्नेलाई ‘समन्वय नगरेको’ भनिन्छ।
कसैले मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरे भने ‘महिलाहरूले त अलि-अलि गरे पनि देखिहाल्छ, मिडियाले खोजी-खोजी लेखिहाल्छ, सेलेब्रेटी’ भन्दै कार्यक्षमता नै कम आकलन गरेर हैसियतमै चोट पर्ने गरी कुरा गरिन्छ।‬ मौका पाए ‘सोह्र शृङ्गार गरेका’ भन्दै अप्सरासम्मको गुणगान गाइन्छ।‬
‘तपाईंलाई राम्रो काम गर्ने, काममा खटिने मान्छे भन्छन् तर खैरो कपाल गरेकी, फोटा राख्ने नक्कली भनेर कुरा काट्छन्। किन मान्छेलाई कुरा काट्ने मौका दिनु हुन्छ? किन मान्छेको तारो बन्नु हुन्छ? कपाल कालो पार्नुस्। तपाईंलाई नजिकबाटै चिनेको छु, तपाईं कस्तो हो भन्ने थाहा छ। राम्रो चाहेकाले कुरा काटेको सुन्दा नमिठो लागेर सुनाएको र सुझाव दिएको मात्र हुँ,’ उहाँले भन्नुभयो।
‘सुनक्रेसा’ का कथा पढेर हुर्किएका हामी सुनको जस्तो रङ भएको सुनौलो कपाल पचाउन सक्दैनौं। कि त्यस्ता कथा किताबमा मात्र सीमित हुन्?
‘कहाँ हो?’ भन्नुभयो।
मैले भनेँ, ‘अफिस मै छु तर कुरा गर्न मिल्छ। त्यता सब ठीक छ नि?’
‘के ठीक भन्नु, बा रात भरि छट्पट छट्पट गर्नु हुन्छ। घाँटी घ्यारघ्यार बाहिरै सुनिने गरी गर्छ। हिजो सिभिल अस्पतालमा गएको।’
मैले अतालिँदै सोधेँ, ‘फेरि गाह्रो भयो र बुबालाई?’
‘कोरोनाका कारण यस पटक त दिल्ली जान नि पाउनु भएन। तर राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटलका डाक्टर मनिषसँग फोनमै कुरा गरेर औषधी मगाएको छ। तिमी घर नआएको नि धेरै भयो। घर कस्तो सुन्ने भएको छ। यता सरूवा भए छोरी भित्र बाहिर गर्दा घर कस्तो उज्यालो हुन्छ।’
‘आमा ढुक्क हुनुस्। अहिले बुवा र हजुरको ख्याल गर्नुस्। अबको लटमा मेरो त्यहीँ नै सरुवा हुन्छ’ भन्दै आमालाई विश्वस्त बनाएर फोन राखेँ। मन्त्रालयमा फेरि आफ्नो कुरा राखेँ।
‘म्याडम हजुरहरूलाई केही चाहिन्छ कि?’ भन्दै मेनु ल्याएर टेबलमा राख्दा हाम्रा कुराको क्रमभंग भयो। बाहिर हेरेको त झमक्क साँझ परिसकेछ। यता टेलिभिजनमा अमेरिकामा उपराष्ट्रपति पदमा दौडिरहेकी कमला ह्यारिसको तस्वीर आइरहेको थियो।